Madaxa hay’adda WHO oo si adag u beeniyay eedeyn uga timid Itoobiya – HalQaran.com
Madaxa hay’adda WHO oo si adag u beeniyay eedeyn uga timid Itoobiya
Addis Ababa (Halqaran.com) – Madaxa Ha’yadda Caafimaadka Adduunka Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa beeniyay eedeymo uu u jeediyay taliyaha guud ee ciidamada Militeriga Itoobiya kaas oo sheegay in uu TPLF ka caawiyay inay hubka.
Dr Tedros ayaa waxa uu kasoo jeedaa qowmiyadda Tigreega, wuxuu ahaa wasiirkii caafimaadka ee maamulkii TPLF.
Madaxa Ha’yadda Caafimaadka Adduunka ayaa waxa uu ugu baaqay dhinacyada ku dagaallamayo Tigray inay wadahadal ay ku soo afjaraan xiisadda si adeegyada caafimaadka iyo gargaarka loo gaarsiiyo shacabka.
Waxay aheyd markii shalay taliyaha ciidamada xoogga dalka Itoobiya Berhanu Jula ayaa ku eedeeyay madaxa ha’yadda Caafimaadka Adduunka in uu wado tallaabooyin uu ku garab siinayo TPLF xilli ciidamada dowladda ay dagaal kula jiraan.
Tags: Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Madaxa Ha’yadda Caafimaadka Adduunka
Musharrax Madaxweyne Daahir Geelle oo si diiran loogu soo dhaweeyay Muqdisho +SAWIRO
Kheyre”Haddii aan lagu heshiinin doorashada, waxay qatar gelin kartaa dowladnimada Somaliya”